Gumiguru 11, 2018 arun
Zaif Exchange inoratidza dzosera Rongai $ 60M crypto Hack
Tech Bureau, zvakasimba shure Japanese crypto Exchange Zaif, akazivisa mumwe dzosera kuronga kuripa vanoshandisa shure $60 miriyoni Hack zvakaitika pachikuva mwedzi wokupedzisira. Tech Bureau vati gwaro sungano Fisco - a dziri pachena mari zvakasimba Japan - kuti uchatamisa basa Zaif kuna Fisco Cryptocurrency Exchange.
dhererwa, pari mumwe 16 marezinesi crypto exchanges muJapan, rwakaona Hack on Sept. 20 apo vamwe $60 miriyoni kukosha cryptocurrencies vakazoguma chakabiwa, kusanganisira anenge 6,000 Bitcoin. Sechikamu bhizimisi kutapurirana ngaakuitirei, Tech Bureau akati Fisco kuti vanotangazve mutengi muripo muitiro, izvo kuti kushandisa yayo Bitcoin kuti dzosera vanoshandisa akanga arasa crypto twa. Tech Bureau akati pashure paizvozvo, zvingava kuiparadza ayo cryptocurrency Exchange zvebhizimisi uye ubvise rezenisi vakanyorwa pamwe Financial Services Agency, Japan pane zvemari musika regulator.
Bitcoin sidechain “mvura-mvura” anoenda mhenyu
3 Makore ari kuitwa, bitcoin wokutanga sidechain “mvura-mvura” zvino kurarama. Raparurwa nesangano Blockstream, Liquid ndiyo arguably kupfuura yemhando Implementation ane zvigadzirwa inonzi sidechains uyo kwenguva refu grail tsvene Bitcoin coders (kunyange zviri kuitwa raparurwa nhasi angava wakadiridzwa-pasi shanduro chepakutanga “trustless” kuona). Still, usingabereki sanganisa mashoko nezvaanogona zvakataurwa kambani, yakavambwa bitcoin wacho pamusoro yakavhurika-bhuku coders mu 2014, akasika. Vakavaka kubva mhenyu blockchain, Liquid zvino kushandiswa kutakura Mavhoriyamu makuru kwema pane imwe yepamusoro kumhanya anoverengeka makambani pakukura bitcoin wacho.
Nhasi iri rinokosha sezvo nemambure pakupedzisira kuzarurira vose Blockstream kuti vamwe kushandisa musi Bitcoin inonyanyoshandiswa Network, ndiko, nokuti zvechokwadi kwema. Blockstream vanogurukuta Samson cheka akati “Izvi zvichaita asimbise bitcoin mararamiro nekuti unogona kuchinjanisa zvakawanda zvakanaka uye nokukurumidza… Zviri vakagadzirira dzokutengesa kushandiswa. Panguva iyi, chiri nyaya kuwana exchanges kuti nokusangana… Zvichava vanokwanisa kuva transacting mabhiriyoni emadhora zvemadhenari bitcoin rimwe zuva.”
Pane zvimwe zvekushandisa pamwero, kuchitsinhanisa anomuchinja bitcoin yawo “LBTC” - nemvura bitcoin chiratidzo - icho pegged kune chaiko Bitcoin. Kamwe akatuma ikoko, exchanges anogona kufamba mari kumativi wakasimba uye zvakawanda nokukurumidza kupfuura huru bitcoin cheni. Pamusoro pe izvozvo, mumavhiki kuuya, Blockstream achange kwokusunungura chikwama zvakananga zvakaitirwa Liquid kwema. Plus, chekambani bitcoin chikwama GreenAddress kare inotsigira powder. Hardware chikwama rinobatsirwa Ledger uye Trezor kunge chakashama tichitarisa urongwa kushandisa zvigadzirwa zvemazuva ano uyewo.
Harvard, Stanford, & With yokuwana vanopedzisira crypto mari
Zvisingapfuure 5 zvikuru masangano edzidzo kusanganisira Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Dartmouth College, uye University of North Carolina vave nerimwe paakapiwa mune kamwe cryptocurrency Fund kuburikidza avo yokuwana.
izvi 5 yunivhesiti yokuwana kunge paakapiwa emamiriyoni emadhora ari mari idzi, izvo mari zvose cryptocurrencies mumuviri uye nokururama mu cryptocurrency makambani. Information wenhau Jon Victor akatsanangura: "A famba nenzira yokuwana kupinda mari kuti zvichaita bheji zvakananga pamusoro cryptocurrencies chiratidzo chikuru chaishanda investor manzwiro kurutivi kunobatsira kirasi, saizvozvo kuti masangano mumakore gumi apfuura akatonyanya achida mari toga Tech makambani. Kutsigira kubva rakada akatarira masangano akadaro aigona kubatsira hunotsigira cryptocurrencies, izvo zvichiri kukosheswa zvakare nengozi zvakawanda zvechechi makambani. "
Tenx is the hot new coin, uye ...